linoo-ayar: အြဖူေရာင် သံေယာဇဉ်
By သစၥာ | သ​စ္စာ on 10:55 PM ရသစာတမ်းငယ်
စိမ်းစိုလန်းဆန်းေနေသာ သစ်ပင်ငယ်မျိုးစံု ေရာင်စံုဖူးပွင့်ေနေသာ ပန်းအလှမျိုးစံုတို့ြဖင့် လှျံြပည့်ေနေသာ ပန်းြခံလှလှေလးကို ကိုယ်စုိက်ြကည့်ေနမိတယ်။ ဒါေပမယ့်.... ကိုယ့်မျက်စိထဲမှာ လှပေ၀လွင်ေနတဲ့ သစ်ပင်မျိုးစံုနဲ့ ပန်းလှလှေလးေတွကို မြမင်မိပါဘူး။ တစ်ခုေတာ့ ကိုယ်သိမှတ် ခံစားမိေနတယ်။ အဲ့ဒါကေတာ့ ကိုယ့်ရဲ့ မျက်၀န်းအစံုမှာ ြပည့်လှျမ်းေနတာ မျက်ရည်ေတွဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာ သိလိုက်ပါတယ်။ အို...... ကိုယ်သိပ်ြပီင်္း ၀မ်းနည်းမိရသလို မင်းအေပါ်ထားခဲ့မိတဲ့ ကိုယ့်သံေယာဇဉ်ကိုလည်း ကိုယ့်ဘာသာ သိလိုက်ရြပီ ရင်ြဖူေလးရယ်။
မှတ်မိေသးတယ် ရင်ြဖူေလးရယ်၊ မင်းေလးကိုယ်တို့အိမ်....... အင်းေလ ကိုယ်တို့ မိသားစု ကမ္ဘာေလးထဲကို ေရာက်လာတဲ့ ေန့ကေလးကိုေပါ့။ အဲ့ဒီေန့က ကိုယ်ေကျာင်းကြပန်လာြပီး ေရမိုးချိုးြပီးတဲ့အချိန်၊ ေကျာ့ေကျာ့ ေမာ့ေမာ့လှပသပ်ရပ်ေနချိန်ေပါ့ ။ ကိုယ်တို့အိမ်မှာ မိသားေတွ အားလံုးစံုတဲ့အချိန်ဟာ ညေနေစာင်းအချိန်ေလ။ ကိုယ့်ေဖေဖဟာ မင်းကိုေပွ့ချီြပီး ြပံုးြပံုးရွှင်ရွှင်နဲ့ အိမ်ေပါ်ကို လှမ်းတက်လာခဲ့တယ်။ ေဖ့ေဖ့ကို ထွက်ြကိုတဲ့ေမေမကလည်း ေဖ့ေဖ့ရင်ခွင်ထဲက မင်းေလးကို ြမင်လိုက်ေတာ့- "ဟယ် လှလိုက်တာေမာင်ရယ်" လို့ဆိုြပီး နူးညံ့တဲ့ သူမရဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ မင်းကို ယုယူချစ်ခင်စွာ လှမ်းယူချီေပွ့လိုက်ေတာ့တာဘဲေလ။
ကိုယ်လည်း ေဖေဖနဲ့ေမေမအနားကို ရုတ်ြခည်းပဲေရာက်သွားေတာ့တာေပါ့၊ ြပီးေတာ့ မင်းေလးကို ေမ့ေမ့လိုပဲ ကိုယ်ေပွ့ချီချင်လိုက်တာ။ မင်းကို ချီဖို့ ကိုယ်လက်လှမ်းေတာ့ မင်းက ကိုယ်ချီမှာစိုးလို့ ခပ်တည်တည်နဲ့ ရန်ေထာင်လိုက်ေတာ့ ကိုယ်ဘယ်မှာ ချီခဲ့ရလို့လဲ။ မင်းက သိပ်ကို ဆွဲေဆာင်မှုေကာင်းတယ်။ မင်းလှုပ်ရှားမှုမှန်သမှျဟာ ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်မိသားစုအတွက် သိပ်ကို လှပ ကဗျာဆန်သွားရတာချည်းပဲ။ တစ်ဦးြပီးတစ်ဦး ြပန်ေရာက်လာတဲ့ ကိုယ်တို့ေဂဟာမှာ အားလံုးဟာ မင်းကို အရိပ်တြကည့်ြကည့်နဲ့ ြဖစ်ကုန်ြကေတာ့တာပါပဲ။ လူစံုေတာ့ ကိုယ့်ေဖေဖက မင်းေလးအတွက် နာမည်ေရွးပွဲကို စတင်လိုက်ေတာ့တာေပါ့။ တစ်ေယာက်တစ်မျိုးေပးြကတဲ့ နာမည်ေလးေတွထဲက ကိုယ်လှျပ်တြပတ်ေရွးေပးလိုက်တဲ့ - "ရင်ြဖူေလး" ဆိုတဲ့နာမည်ကို မင်းအပိုင်ရသွားတယ်။ " ဒီမှာ မင်းနာမည်တစ်လံုး ေနနို်င်ေအာင် မင်းနာမည်ကို မှည့်ေခါ်နိုင်တာ ကိုယ်ဆိုတာ ရင်ြဖူေလး မှတ်ထားသိလား" လို့ လက်ညိှုးေလးေထာင်ြပီး ကိုယ်ေြပာလို့ အားလံုးရဲ့ ရယ်ေမာြခင်းကို ကိုယ်ခံရေသးတယ်။ ဒါေပမယ့် - ေဖေဖနဲ့ေမေမကေတာ့ ရင်ြဖူေလးလို့ မေခါ်ြကဘူုး။ နှစ်ဦးသေဘာတူ "သမီး" လို့ ေခါ်ြကတယ်ေလ။ ကိုယ်နဲ့ ကုိယ့်အစ်မကေတာ့ "ရင်ြဖူေလး"လို့ ေခါ်ြကတယ်။
"ရင်ြဖူေလး"က စွာတယ်ကွာလို့ေြပာရင် ကိုယ့်ကို ဆတ်ဆတ်ထိမခံ တုန့်ြပန်တတ်တယ်။ ကိုယ့်ကို မီတဲ့ေနရာ လှမ်းြပီး ကိုက်ဆွဲတတ်တယ်။ ြပီးေတာ့ -ချက်ြခင်းပဲ ေဖေဖနဲ့ေမေမကို တိုင်တတ်တာ၊ ေဖေဖနဲ့ ေမေမကလည်း ရင်ြဖူေလးကို သိပ်ချစ် သိပ်အလိုလိုက်ေတာ့ သူမ ဘာြဖစ်ချင်ေစချင်တယ်ဆိုတာ သိြကေတာ့ ကိုယ့်ကိုလှမ်းြပီး ဆူတတ်တယ်။ ကိုယ်အဆူခံရြပီဆိုရင် "ရင်ြဖူေလး" သေဘာတကျ ရိှေနတတ်တယ်မို့လား။ ဒါကိုပဲ ေဖေဖနဲ့ေမေမက ရယ်စရာတစ်ခုအြဖစ်နဲ့ အိမ်ကိုလာတဲ့ ဧည့်သည်တိုင်းကို ေြပာြပေလ့ရိှတတ်တာ။ ေနာက်ြပီး - "ရင်ြဖူေလး" ကိုယ့်ကို လက်ပွန်းတသီး မေနတတ်ဘူး။ ကိုယ်တို့ သားအဖေရှ့မှာ အြမဲတမ်း အိေြန္ဒသိက္ခာရိှတဲ့ ပံုမျိုးနဲ့ ေနြပတတ်၊ သွားလာ လှုပ်ရှားြပတတ်ေပမယ့် ....ေဟာ ေမေမတို့ မမတို့နဲ့များဆိုရင် အြမဲတမ်း ပွတ်သီးပွတ်သပ် အြမဲတမ်းသွာေလရာကို ေနာက်က တေကာက်ေကာက်၊ အြမဲတမ်းပျာယာခတ်လှုပ်ရှား ေနတတ်တာ။
တစ်ကယ်ေတာ့ "ရင်ြဖူေလး"ဟာ ေမွးရကျိုးနပ်ပါတယ်ေလ။ ေမေမ မီးဖိုေချာင်၀င်ရင် သူလဲ၀င်လိုက်သွားြပီး ေမေမလုပ်သမှျ အနားက ငုတ်တုတ်ထိုင်ြကည့်ေနတတ်တယ်။ ေမေမချက်ြပုတ်ဖို့ ြပင်ဆင်ထားတဲ့ အမဲ၊ သား၊ ငါးေတွကို ယင်မနားေအာင် "ရင်ြဖူေလး"ဖမ်းေပးေနေလ့ရိှတယ်။ ြပီးေတာ့ "ရင်ြဖူေလး"က စည်းကမ်း သိပ်ရိှတယ်၊ ဘယ်ေတာ့မှ ဇိုးဇိုးဇပ်ဇပ်နိှုက်ယူမစားတတ်ဘူး ၊ ေကျွးေနကျအချိန်မှာ၊ စားေနကျ ပန်းကန်နဲ့ ထည့်ေကျွးတာေတာင်မှ ေမေမက "စားေလ သမီးေလး" လို့ေြပာမှ စစားတတ်တာလည်း ရင်ြဖူေလးရဲ့ အကျင့်တစ်ခုပါပဲ။ မမတို့ ေရချိုးေနရင် ေရချိုးခန်းအြပင်မှာ "ရင်ြဖူေလး" အြမဲရိှေနတတ်ြပီး၊ အဲ.. မမလဲ ေရချိုးခန်းက ထွက်လာေရာ ရင်ြဖူေလးလဲ မမခန်းထဲ တန်းေနေအာင် လိုက်သွားတာပဲ။ မမအခန်းထဲက ကိုယ်လံုးေပါ် သံုးဘက်ြမင်မှန်တင်ခံုမှာ မမနဲ့အတူ မှန်ကို အြပိုင်ြကည့်တတ်တာ၊ မမအလှြပင်တာကို ေဘးကေန မမှိတ်မသုန် စိုက်ြကည့်ေနတတ်တာ အလှြကိုက်မေလး ရင်ြဖူေလးရဲ့ စရိုက်ေလးေတွပဲေပါ့။ မမက ရင်ြဖူးေလးကို သူမအိပ်ခန်းနဲက ကပ်လှျက်အခန်းမှာ ကုတင်၊ြခင်ေထာင်၊ ၀က်မှင်ဘီး၊ မှန်၊ ေပါင်းဒါမှုန့် အစံုအလင်နဲ့ ကျကျနန၊ လှလှပပေနရာထားေပးေတာ့ ရင်ြဖူေလးကလည်း မမကို ပိုြပီး အချစ်ပုိတယ်နဲ့ တူပါရဲ့ ။
ညေန ၅နာရီခွဲ၊ ၆နာရီဆို .. ကိုယ်နဲ့ေဖေဖက ြခံထဲဆင်းြပီး ြခံအလုပ်ရိှရင်လဲ လုပ်တယ်၊ အလုပ်မရိှရင် ြခံထဲက ဒန်းေလးမှာထိုင်ြပီးေတာ့ စကားေြပာေနေလ့ရိှတယ်။ အဲ့လိုမျိုး ထိုင်ေနြပီဆိုရင် မေယာင်မလည်နဲ့ ေရာက်လာေလ့ရိှတယ်။ ဒန်းေပါ်ထိုင်ေနတဲ့ ေဖေဖ့ရဲ့လက်ကို အသာအယာနမ်းရှုပ်ေလ့ရိှြပီး ကိုယ်ကျေတာ့ အဲ့ဒီလို နှုတ်မဆက်ဘဲနဲ့ ကိုယ့်ေဘးမှာ လာထုိင်ြပီး ကိုယ့်ကို ခပ်ေမာ့ေမာ့ေလး ြကည့်ေနတတ်တယ်။ "ေြမြကီးေပါ်မှာထိုင်"လို့ ေဖေဖက သူ့ကိုဆူေြပာေလး ေြပာလိုက်ရင် ေပေနတဲ့ ေြမမှုန့်ေတွကို ကပျာကယာ လူးပစ်ြပီး ချာခနဲေနေအာင် အိမ်ေပါ်ကို ေြပးတက်သွားေလ့ရိှတယ်။
"ရင်ြဖူေလး" တစ်ေန့တာ လုပ်ရတဲ့အလုပ်ေတွကို ကိုယ်မှတ်မိေသးတယ်။ မနက်ဆို မိုးလင်းတာနဲ့ "ရင်ြဖူေလး" နိုးေနြပီ၊ ေမေမေဈးသွားဖို့ ြပင်ဆင်ြပီးထွက်တာနဲ့ "ရင်ြဖူေလး"က ြခံထိပ်ထိ ေမ့ေမ့ကို လိုက်ပို့တတ်တယ်။ ြပီးရင်ေတာ့ ေမေမေဈးအြပန်ကုိ အိမ်ေဘးက ေရတွင်းေကျာက်ြပားေပါ်မှာ ထုိုင်ြပီး ေစာင့်ေနတတ်တယ်။ ေမေမေဈးက ြပန်လာရင် တ်စအိမ်သားလံုးအတွက် ေဈးကပါလာတဲ့ မုန့်ေတွနဲ့ မနက်စာြပင်ေပးေလ့ရိှသလို "ရင်ြဖူေလး"အတွက်လည်း မုန့်တစ်ခုခု ပါလာေလ့ရိှတယ်။ မုန့်စားြပီးသွားရင် ရံုးသွားဖို့ ြပင်ဆင်ေနတဲ့ ေဖေဖနဲ့မမကို နှုတ်ဆက်အနမ်းနဲ့ နှုတ်ဆက်ေလ့ရိှပါတယ်။ ကိုယ်ကေတာ့ (၁၁)နာရီမှ တက်ရတဲ့ေကျာင်းဆိုေတာ့ "ရင်ြဖူေလး"ရဲ့ နံနက်ပိုင်း နှုတ်ဆက်သူစာရင်းမှာ ကိုယ်မပါဘူးေလ။
ကိုယ့်ေဖေဖနဲ့ မမတို့ အိမ်က ထွက်သွားြကြပီးရင် "ရင်ြဖူေလး"က ေမေမနဲ့အတူ မီးဖိုေချာင်မှာ ရိှေနြပီးေပါ့။ "ရင်ြဖူေလး" ကိုယ်ေကျာင်းသွားေတာ့မယ် ဆိုြပီး သူ့ေခါင်းကို ပုတ်ေလ့ရိှတယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာ "ရင်ြဖူေလး"က လှမ်းပုတ်တဲ့ ကိုယ့်လက်ကို မမိမိေအာင် ဖမ်းဆွဲြပီး ခပ်ဖွဖွေလး ငံုခဲတတ်ြပီး ေမေမြကားေအာင်လို့ အသံတစ်မျိုးနဲ့ ေအာ်တတ်တယ်။ ေမေမက "ကွယ်... သားကလဲ၊ ကေလးကို သိပ်စတာပဲ၊ ကဲကဲ သမီးေလက လွှတ်ေပးလိုက်ေနာ်" လို့ ေချာ့ေချာ့ေမာေ့မာ့ေြပာမှ ကိုယ့်လက်ကို လွှတ်ေပးေလ့ရိှတယ်။ "ရင်ြဖူေလး"ဟာ ကုိယ်တို့အားလံုးက ချစ်မှန်း စေနမှန်း သိပ်သိတယ်။ ဒါေြကာင့် တြခားသူေတွမတူ၊ ြခားနားေအာင် လိမ္မာြပ၊ သနားေအာင် ေနြပတတ်တာလားလို့ ကိုယ်ေတွးမိတယ်။
ကိုယ် မင်းနဲ့ မခွဲနိုင်ပါဘူး "ရင်ြဖူေလး"ရယ်။ ကိုယ်တစ်ေယာက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးေလ၊ ကိုယ်တို့ တစ်မိသားစုလံုးနဲ့ ကုိယ်တို့နဲ့ပတ်သက်သူအားလံုးက "ရင်ြဖူေလး"ကို မခွဲချင်ြကတာပါ။ ဒါေပမယ်........ ကိုယ့်တို့အားလံုးနဲ့ ရင်ြဖူေလး ခွဲခဲ့ရတယ်။ သိပ်ြပီး လိမ္မာတဲ့ သိပ်ြပီး အလိုက်သိတတ်တဲ့ ကိုယ်တို့ရဲ့ အချစ်ေတာ်ေလး ရင်ြဖူဟာ၊ ဘယ်လိုမှ မေမှျာ်လင့်ထားခဲ့တဲ့ ေ၀ဒနာတစ်ခုနဲ့ ဘယ်သူမှ ေရှာင်လွှဲလို့မရတဲ့ ေသြခင်းတရားကို ရင်ဆိုင်သွားခဲ့ရပါတယ်။ "ရင်ြဖူေလး" ေသဆံုးတဲ့ေန့ကဆိုရင် ေဖေဖကလွဲြပီး ကိုယ်တို့အားလံုး မျက်ရည်လည်ရွှဲ ငိုပွဲဆင်ြကတဲ့ေန့ဆိုရင်လဲ မမှားပါဘူး ရင်ြဖူေလးရယ် ။
နို့မြပတ်ခင် ငယ်ငယ်ေလးကို ေဖေဖကိုယ်တိုင် ေပွ့ချီလို့ ကိုယ်တို့အိမ်ကိုေရာက်ခဲ့တဲ့ ရင်ြဖူေလးဟာ.... ရုတ်တရက် ဆံုးပါးသွားချိန်မှာေတာ့ ကိုယ်နဲ့ေဖေဖ နှစ်ေယာက်ေပွ့ချီြပီး မတာေတာင်မှ မနည်းမယူြကရတဲ့ အထိ ထွားကျိုင်းလှပါတယ်။ ရင်ြဖူေလးရဲ့ ေရာဂါေ၀ဒနာဟာ အရွယ်မတိုင်မီ ေရချိုးေပးလို့ ၀မ်းတွင်းမှာ ေကျာက်ေပါက်တဲ့ေရာဂါေလ၊ ဆရာ၀န်ရဲ့ေြပာစကားအရဆိုရင် အေကျွးအေမွးေကာင်းလွန်းလို့ ကျန်းမာေနတာတဲ့ ေလ။ ေကျာက်ေပါက်ေနတာ ြကာြပီဆိုပဲ၊ ြဖစ်ရေလ "ရင်ြဖူေလး"ရယ်။ ရင်ြဖူေလးေရ... ကိုယ်တို့တစ်အိမ်လံုးမှာ ရင်ြဖူေလးရဲ့ ေြခရာေတွ အနှံရိှေနမယ်ဆိုတာ ကိုယ်တို့အားလံုး ယံုြကည်ထားပါတယ်။ မိုးလင်းကေန မိုးချုပ် ကိုယ်တို့အားလံုးရဲ့ မျက်၀န်းေတွထဲမှာ ရင်ြဖူေလးရဲ့ လှပြပီး ချစ်စရာေကာင်းတဲ့ ၊ နူးညံ့သိမ်ေမွ့တဲ့ လှုပ်ရှားမှုေတွကို ြမင်ေယာင်ေနမိပါတယ်။
ေဖေဖေခါ်လာစက ကိုယ်ဘာေြကာင့် "ရင်ြဖူေလး"လို့ ေခါ်ရသလဲ သိလား....... မင်းေလးရဲ့ တစ်ကုိယ်လံုးကို ဖံုးအုပ်ထားတဲ့ အေသွးကျကျအုန်းခွံေရာင် အေမွးပွပွလှလှေတွြကားက မင်းေလးရဲ့ ေရှ့ရင်ဘတ်ေနရာက ြဖူဆွတ်ေဖွးလွေနတဲ့ အြဖူေရာင်အကွက်လှလှေလးေြကာင့် "ရင်ြဖူေလး"လို့ မှည့်ခဲ့တာေပါ့။ တကယ်ေတာ့ မင်းဟာ အမျိုးအစားသိပ်ေကာင်းတဲ့ မျိုးြခားေခွးမေလးတစ်ေကာင်ပါ။ ရင်ြဖူေလးကေတာ့ ကိုယ့်ကို ထားခဲ့ြပီး ေသဆံုးသွားခဲ့ပါြပီ။ ဒါေပမယ့် ရင်ြဖူေလး နှစ် နှစ်ေကျာ်ေနသွားတဲ့ ကိုယ်တို့မိသားစုရဲ့ ရင်ြဖူေလးအေပါ်ထားတဲ့ သန့်ရှင်းတဲ့ချစ်ေမတ္တာနဲ့ ရင်ြဖူေလးက ကိုယ်တိုက မိသားစုအေပါ်မှာထားတဲ့ ချစ်ေမတ္တာေတွကေတာ့ တစ်ကယ့်ကို ထာ၀ရ "အြဖူေရာင် သံေယာဇဉ်" ေတွပဲရယ်လို့ မှတ်ယူေနမိပါတယ်။ ေနာက်ြပီး ကိုယ်အသက်ရှင်ေနသေရွ့ ရင်ြဖူေလးကို အမှတ်ရေနမှာပါကွာ။
ရင်ြဖူေလး ေကာင်းရာသုဂတိ ေရာက်ပါေစလို့........................
8 Response to 'အြဖူေရာင် သံေယာဇဉ်'
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_10.html?showComment=1221199237235#c8470565119949371294'> September 11, 2008 at 11:00 PM
ဟင်.. ဝမ်းနည်းလိုက်တာ .. ချစ်စရာေလးေနာ် ေခွးေလးက.. သိပ်လိမ္မာတာပဲ... ရင်ြဖူေလး ေကာင်းရာသုဂတိလားပါေစ
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_10.html?showComment=1221222587540#c3798295456082713508'> September 12, 2008 at 5:29 AM
ေတာ်ေသးတာေပ့ါ ။ ပုလုေကွးလို (၁၀)ဘီးကားြကီး မဟုတ်လို့။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_10.html?showComment=1221235360251#c8137053478246890065'> September 12, 2008 at 9:02 AM
အိမ်က ကျားဘိုြကီး သတိရတယ်ဗျာ...
အြပင်သွားတာ လိုက်ပို့ရင်း ကားတိုက်ခံ လိုက်ရတာ.... :(
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_10.html?showComment=1221289478561#c5699352340648976076'> September 13, 2008 at 12:04 AM
သံေယာဇဉ်ရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းေကာင်းတစ်ေယာက် တစ်ခုခုြဖစ်သွားသလိုပဲ။
ေခွးနာမည်ကလည်း လူနာမည်နဲ့ ဆင်တယ်။
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_10.html?showComment=1221330425254#c2161782108436482382'> September 13, 2008 at 11:27 AM
၀မ်းနည်းစရာ သံေယာဇဉ်ေတွေပါ့ ကိုလင်းဦးရာ.
တစ်ခါတစ်ခါ ခံစားရတာ သိပ်မကိုက်လှဘူးဗျ... :)
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_10.html?showComment=1221376498197#c1527649149782898521'> September 14, 2008 at 12:14 AM
ညီမလဲခံစားခဲ့ဖူးတယ် သူ့နာမည်ကလူစီတဲ့ အရမ်းလိမ်မာပီး အရမ်းစွာတဲ့ေကာင်မေေလးေပါ့ ဒါေပမဲ့သူေသသွားတဲ့အထိ အပျိုြကီးဘ၀နဲ့ေနသွားခဲ့ရတာပါ သူနဲ့တန်တဲ့သူမရှိဘူးဆိုပီးေတာ့ မေပးစားခဲ့တာေလ ေနာက်မှေနာင်တရမိတယ် သူေသသွားေတာ့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်မကျန်ခဲ့လို့ေလ ဒါေြကာင့်ေနာက်ထပ်သံေယာဇဉ်ြဖစ်မဲ့ကိစ္စဆိုေရှာင်ခဲ့ တာြကာပီ အခုအကိုတင်ထားတဲ့အြဖူေရာင် သံေယာဇဉ်ကို ဖတ်မိပီးေတာ့ြပန်သတိရသွားတယ် လူစီရယ် လူစီေလးေရာ ရင်ြဖူေလးေရာ ေကာင်းရာဘံုဘ၀ေရာက်ပါေစ...
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_10.html?showComment=1226749446106#c3536532449105249904'> November 15, 2008 at 3:44 AM
It has been already4months ever since My dog Leo passed away.. I called him " Maung Lay " as he was likealittle brother to me.. I dare to say that only dog-owners will understand such kind of feeling-feeling of losing your precious one who was likeapart of your family..To me, my dog was part of my family..I still vividly remember the day that Leo left us..My father was crying holding the lifeless body of Leo.I was very sad that I could not even cry eventhough I tried so hard ..I miss him every single day as he was my little brother..
Human beings betray but dogs never
http://linoo-ayar.blogspot.com/2008/09/blog-post_10.html?showComment=1227641138756#c1039029231198907802'> November 25, 2008 at 11:25 AM
စာတမ်းငယ်လို့ေတာ့ နာမည်မတပ်သင့်ေသးဘူးထင်တာပဲ။ အေရးအသားေတွက ရီးစားစာ သေဘာမျိုးြကီးြဖစ်ေနတယ်ထင်တယ်ဗျာ။ စာဖတ်သူကို ဝမ်းမနည်း နည်းေအာင် အတင်းလုပ်ခိုင်းသလိုြကီးလည်း ြဖစ်ေနတယ်။ ဒီထက်ေကာင်းေအာင်ေရးနုိင်ပါေစဗျာ။